तीन सय विद्युतीय बस खरीद गर्न सरकारले साझालाई तीन अर्ब निकासा गर्यो
काठमाडौँ । सरकारले तीन सय विद्युतीय बस खरीद गर्न साझा यातायात सहकारी संस्थालाई रु तीन अर्ब निकासा गरेको छ । बस खरीदका लागि नेपाल सरकारबाट साझाका खातामा रकम आइसकेको संस्थाका प्रबन्धक महेन्द्रराज पाण्डेयले बताए । विद्युतीय बस खरीद गर्नेबारे मन्त्रिपरिषद्ले केही समय पहिले निर्णय गरेको थियो । सरकारले यस वर्षको बजेटमा समेत बस खरीदका लागि रकम छुट्याएको थियो । विस्तृतमा
सुनको भाउ ६५ हजार ५ सय
आज नेप्से २.३७ अंकले घट्यो
टाटाको मनसुन चेकअप क्याम्प सुरु
माछापुच्छ्रे बैंकको स्मार्ट खाता बचतमा १४ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा सुविधा
आज सुन र चाँदीको भाउ बढ्यो
लुक्ला, स्याफ्रुबेंसी र जोमसोमलाई स्मार्ट सिटी बनाउने सरकारको योजना
आज आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट प्रस्तुत हुँदै
काठमाडौँ । आज संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट प्रस्तुत हुने भएको छ । आज अपरान्ह ४ बजे संघीय संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका हुन् । त्यसका लागि प्रतिनिधिसभाका सांसदलाई अपरान्ह ३ः४५ बजेभित्र सभाहलमा प्रवेश गरी आआफ्ना स्थानमा बस्नसमेत आग्रह सभामुख कृष्ण बहादुर महराले आग्रह गरेका छन् ।
सौराहमा गैँडाको टाउकोजस्तो देखिने गरी सभाहल निर्माण गरिँदै
चितवन । पर्यटकीय नगरी सौराहामा गैँडाको झझल्को दिने गरी सौराहा सभाहल निर्माण गरिने भएको छ । रत्ननगर नगरपालिका–७ सिस्वारचौरमा रु ५५ करोडको लागतमा सुविधासम्पन्न सभाहल निर्माण गर्न लागिएको हो । सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना भरतपुरका इञ्जिनीयर सृष्टि भुसालका अनुसार सभाहलको बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ । पछिल्लो प्रविधि अपनाएर बनाउन लागिएको सो सभाहल दुई हजार १०० वर्गमिटरको हुने भुसालले बताए । सभाहलमा एक हजार सहजै बस्न सक्नेछन् । यसका अतिरिक्त १५० क्षमताको बैठककक्ष, आकर्षक स्टेज, पूर्वतयारी कक्ष, शौचालय, कार्यक्रममा नाम दर्ता गर्ने ठाउँ, भवनभित्र खुला क्षेत्र रहनेछन् ।
काठमाडौँ मोडेल कलेजको ‘समर समिट’ स्टोनी ब्रुक युनिभर्सिटीको सहकार्यमा सम्पन्न
काठमाडौँ । काठमाडौँ मोडेल कलेजले प्राज्ञिक उन्नयनका लागि दुई दिने आवासीय गोष्ठीको आयोजना सम्पन्न गरेको छ । अमेरिकास्थित स्टोनी ब्रुक विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा सम्पन्न भएको उक्त कार्यशाला त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. सुधा त्रिपाठीको प्रमुख आतित्थ्यतामा सम्पन्न भएको हो ।
भद्रपुर । भारतले पूर्वी नाकाबाट पेट्रोलियम पदार्थ बोकेर नेपाल भित्रिन लागेका ७३ ट्याङ्करलाई पश्चिम बङ्गालको पानीट्याङ्की भन्सारमा रोकेपछि पूर्वमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएको छ । अनलाइन माध्यमबाट भन्सार ‘इन्ट्री सिस्टम’ शुरु गरिएको जनाउँदै भारतीय भन्सारले चार दिनदेखि तेलवाहक नेपाली ट्याङ्करलाई नाकामै रोकेर राखेको नेपाल आयल निगम चारआली कार्यालयका सूचना अधिकृत लोकमणि पौडेलले बताए ।
यस्तो छ जुम्ली कालीमार्सी धानको इतिहास
जुम्ला । सामान्यतया अन्य जिल्लामा असारमा मात्रै धान रोपिन्छ । तर, जुम्लामा भने जेठमै धान रोप्ने चलन छ । चिसोका कारण असारमा रोपेको धान समयमै नपाक्ने भएकाले यहाँ जेठमै धान रोप्ने गरिएको हो । यतिखेर जुम्लाका कृषकलाई कालीमार्सी धान रोप्ने चटारो छ । सोमबार विश्वकै अग्लो स्थान पातारासी गाउँपालिकाको छुमचौर ज्युलो (खेतहरु) मा कृषकले मार्सी रोपेका छन् ।
बुटवलमण्डपमा अन्तरराष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण शुरु
बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिका–१०, रामनगरस्थित बुटवलमण्डपमा आधुनिक तथा उच्च प्रविधियुक्त ‘अन्तरराष्ट्रियस्तरको बुटवल प्रदर्शनी केन्द्र’ निर्माणका लागि आजदेखि काम शुरु भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालय, शहरी विकास र भवन निर्माण विभाग, बुटवल सभागृह तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण कार्यान्वयन एकाइले गरेको बोलपत्र स्वीकृत भएपछि आजदेखि काम शुरु गरिएको हो । उक्त आयोजना शुरु भएको २७ महीनामै निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको भवन विभागका महानिर्देशक मनिराम गेलालले जानकारी दिए ।
काठमाडौँ । आज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सामान्य वृद्धि भएको छ । आज नेप्से शुन्य दशमलव ३४ अंकले बढेर १ हजार ३ सय २ दशमलव ९६ को बिन्दुमा पुगेर कारोबार बन्द भएको छ ।
हवाईमार्गबाट ढुवानी गर्न नसकिदा चामल नेपालगञ्ज र सुर्खेतामा थन्कियो
हुम्ला । सिमकोटस्थित नेपाल खाद्य संस्थानको चामल हवाईमार्गबाट ढुवानी गर्न नसकिदा नेपालगञ्ज र सुर्खेतामा थन्किएको छ । निजी विमान कम्पनीहरुले खाद्यान्न ढुवानी नगर्दा वितरणमा समस्या हुने भएको छ । वैशाखदेखि निजी विमान कम्पनीले नेपागञ्ज र सुर्खेतबाट खाद्यान्न ढुवानी नगर्दा सिमकोटस्थित खाद्य संस्थानको गोदामा चामल न्यून परिमाणमा मौज्दात छ । वैशाखमा निजी विमान कम्पनीले पूर्वी नेपालमा उडान भरेकाले चामल ढुवानी हुन नसकेको नेपाल खाद्य संस्थानका नासु सुरेन्द्र पोखरेलले जानकारी दिए । अहिले गोदाममा दुई हजार दुई क्विन्टल मात्र चामल मौज्दात छ ।